5 အဖြစ်များသည့် Programming ဒဏ္ဍာရီဖော်ထုတ် - ၎င်း၏ Tech မှကျောင်း
5 မေ 2017
5 အဖြစ်များသည့် Programming ဒဏ္ဍာရီဖော်ထုတ်
software ကိုကွဲပြားခြားနားသောစက်မှုလုပ်ငန်းများကျော်အလုပ်အကိုင်များကိုအစားထိုးအဖြစ်, ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်မာကိုပိုမကြာသေးမီမှတ်ဉာဏ်ထဲမှာမဆိုအချိန်ထက်ဆည်းကပ်ကြသည်။ တစ်ဦးပြုစုသူသတ်သတ်မှတ်မှတ်ကျွမ်းကျင်မှုရှိပြီးအခါအမှတ်မှာပရိုဂရမ်းမင်းအတွက်အကျိုးအမြတ်အလုပ်အကိုင်များရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာကိုသူတို့လျော်ကြေးများနှင့်အားသာချက်များကိုရိုက်နှက်မိန့်နိုင်ပါတယ်, ဆိုလိုတာကမြောက်မြားစွာကွဲပြားခြားနားသောစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ထက်လျော့နည်းတောင်းဆိုမှုများရှိနိုင်ပါသည်။
သို့သျောလညျး, programming ကိုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အနိုင်ပါတယ်သကဲ့သို့အကျိုးအမြတ်ကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုပုံမှန်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများ၏ပရိုဂရမ်းမင်းမြင်ကွင်းတစ်ခုဝင်ရောက်အကြောင်းကိုတွန့်ဆုတ်နေဆဲရှိပါတယ်။ ဤတွင် programming နဲ့အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကအတိအကျကိုလုံးဝမဟုတ်နှင့် ပတ်သက်. ငါးအခြေခံဒဏ္ဍာရီဖြစ်ကြသည်။
ဒဏ္ဍာရီ #1: ပရိုဂရမ်အားလုံး Play စနှင့်အဘယ်သူမျှမကလုပ်ငန်းခွင်များမှာ
နည်းပညာအဖွဲ့အစည်းများမှာ ping ရဲ့ Pong စားပွဲနှင့်ဂိမ်းကစားခန်း၏ပုံပြင်များ developer များတစ်လှည့်ဖြားကျော်ကြားမှုကိုငါပေးပြီ။ အမှန်အတိုင်းခံရ, programmer တွေမကြာခဏအရှိဆုံးနာမငြိမ်ဝန်ခံအစီအစဉ်များအပေါ်လေယာဉ်ဆင်းသက်သည်သန်းခေါင်ရေနံကိုစားသုံးကြသည်။
သူတို့သည်ဤကစားသူတို့နေ့ရက်ကာလကိုသုံးဖြုန်းမဆိုလိုပါ မှလွဲ. မြောက်မြားစွာ software ကို developer များ, မခွဲခြားဘဲသူတို့နေအိမ်ကနေအလုပ်လုပ်ဖို့သို့မဟုတ်နေ့တိုင်းရုံးခန်းသို့သွားရှိမရှိ၏, ချက်နဲ့နာရီအလုပ်လုပ်ကြသည်။ သူတို့ဟာမကြာခဏသူတို့တစ်တွေအဓိကအကျိုးတူနေရခြင်းပါပဲအထူးသဖြင့်အခါ, ညနေပိုင်းနှင့်ရက်သတ္တပတ်၏စွန်းတိုင်အောင်အလုပ်လုပ်ကြသည်။
ဒဏ္ဍာရီ #2: ပရိုဂရမ်အားလုံးလုပ်ငန်းခွင်များနှင့်အဘယ်သူမျှမ Play စများမှာ
programmers ကွိုးစားအားထု - တစ်လျောက်ပတ်သောအကျိုးတူကြီးကြပ်ရေးမှူးကို set up သို့သော်နှင့်အတူသူတို့ဓလေ့ထုံးတမ်း 40 နာရီအလုပ်ရက်သတ္တပတ်ကျော်ဖြတ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒါဟာသကျမှေးလုပျငနျးရှာဖွေနေသည့်အခါ software ကို developer များကဒီဒေတာအတွက်မျက်နှာပြင်ကြောင်းမရှိမဖြစ်ပါပဲ။ နောက်ကျောပရိုဂရမ်မာတစ်ဦးကာလ touchy အကျိုးတူကြားတွင် extension ကိုတွားအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူ, ဒါမှမဟုတ်နေသောဖောက်သည်အပေါ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတွန်းအားပေးပိုနာရီအတွင်းထားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါသလား?
ပါရမီရှင်, ဇွဲရှိရှိပရိုဂရမ်မာတစ်ဦးလူကြိုက်များမှုနှင့်အတူတစ်ဦးမဟုတ်တစ်ဦးစိုးမိုးရေးအဖြစ်စုံလင်သောအခွအေနေသလောက်တက်လေသူကို developer များစုံတွဲတစ်တွဲဆက်ပြီးထုတ်ဝတ်နှင့်တစ်ဦးထက်သာလွန်အလုပ်ယဉ်ကျေးမှုနေရာချထားနိုင်ပါတယ်။
ဒဏ္ဍာရီ #3: ပရိုဂရမ် Antisocial များမှာ
သငျသညျ programmer တွေနာရီအတွင်းထားသူကိုလူမှုရေးအရ-နှောင့်နှေးစဉျးစားဆငျခွကလူတစ်ဦးကွန်ပျူတာနှင့် Cheetos တစ်အိတ်နှင့်အတူတည်းခိုကြသည်ကိုကြားကြပေမည်။ က may အဖြစ်ဒီနေ့ရဲ့ပရိုဂရမ်လေ့, လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များနှင့်အတူတသမတ်တည်း interface အကြီးအကဲများတိုးချဲ့နှင့် client များအဆုံးသတ်ကြောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤသည်ကိုသူတို့ဖန်တီးသင့်ကြောင်းဆော့ဖ်ဝဲအကြောင်းကိုဒေတာစုဆောင်းမိသောနည်းလမ်းများဖြစ်ပါသည်။
မြောက်မြားစွာကိုယ်စားလှယ်များ၎င်းတို့၏ကွန်ပျူတာများနှင့်ကွဲပြားခြားနား gadgets အားဖွငျ့ဆက်သွယ်တိုင်းလုပ်အားခ၏ သာ. ကွီးမွတျစိတျအပိုငျးဖြုန်းနေကြတယ်။ ဤနည်းအားဖြင့် programmer တွေအမှန်တကယ်လည်းထူးခြားသောမရှိကြပေ။
ဒဏ္ဍာရီ #4: ဆော့ဝဲအပေါငျးတို့သလုပ်ငန်းခွင်မ
ဟုတ်ပါတယ်, ပရိုဂရမ်မာ '' ဘဝတွေကိုရိုးရှင်းတဲ့စေတူရိယာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အဲဒီအစားခြစ်ရာတစ်ခုချင်းစီမှလျှောက်လွှာဖွံ့ဖြိုးဆဲထက်ပါးရည်နပ်ရည် developer များသူတို့ကသူတို့အဘို့အလုပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမတည်ဆဲကုဒ်အပေါ်မူတည်နိုင်သည်ကိုနားလည်သဘောပေါက်။ ဒီ code programmer တွေသူတို့ရဲ့လျှောက်လွှာသို့သူတို့ကိုငါစီမံကိုင်တွယ်မတိုင်မီ bug တွေထွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်အတူအဖြစ်ယခုကြိုးစားခဲ့ပြီစာကြည့်တိုက်များကနေအစပြု။
ထိုအစာကြည့်တိုက်နှမြောနိုင်ပါတယ်သလောက်အချိန်နှင့်အမျှပရိုဂရမ်မာနေတုန်းပဲခြစ်ရာကနေ coding ထက်မှန်မှန်နိုင်စွမ်း၏ပိုကြီးတဲ့ပမာဏကိုလိုအပ်နိုင်သည့်တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဒိုမိန်း၏သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တဦးတည်း fit မှ code ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်စွမ်းရည်ရှိသင့်ပါတယ်။
ဒဏ္ဍာရီ #5: ပရိုဂရမ်သင်္ချာ Geniuses များမှာ
စကားမစပ်, လူ့အဖွဲ့အစည်းမာစတာချာအဖြစ်ပရိုဂရမ်မာတလွဲသတ်မှတ်ထားပါသည်။ အမှန်တရားအတွက်, code ကိုရေးသားခွဲအလယ်တန်းကျောင်းနှင့်ကျောင်းအတွက် ယူ. အတန်းနှင့်အတူလုပ်ဖို့နီးပါးမျှရှိပါသည်။ variable ကိုအခြေပြုသင်္ချာ, က may အဖြစ်ကုဒ်ရေးသားဖို့မယုံနိုင်စရာတည်ထောင်ပေးနိုငျသောရလိမ့်မည်။
က may ကဲ့သို့ဖြစ်ရ, coder တွေယနေ့ applications များတည်ဆောက်ရန်အသုံးပြုစာကြည့်တိုက်များနှင့်၎င်း module အများစုနှင့်အတူ convoluted တွက်ချက်မှုကျိုးကြောင်းဆီလျော်ထိရောက်စွာအခြေချနေထိုင်နိုင်ပါသည်။ မည်သို့ပင်သငျသညျသဘာဝကိန်းဂဏန်းအဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကြည့်ကြဘူးသောဖြစ်နိုင်ခြေ၏, ဖြစ်ကောင်းသင်သည်စိတ်ဝင်စားဖွယ် variable ကိုအခြေပြုသင်္ချာရှာဖွေတွေ့ရှိနှင့် programming ကိုသင်တို့အဘို့မှေးလုပျငနျးသောလျောက်ပတ်သောနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်လိမ့်မယ်။
programmer တွေဆိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အကြွင်းမဲ့အာဏာအများဆုံး persevering ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သူတို့ထိုနည်းတူလည်းသူတို့ကိုကျချိန်တွေအများကြီးပေးသောကျေနပ်စရာအသက်မွေးဝမ်းရှိသည်။ သူတို့ကျွမ်းကျင်မှု ACE နှင့်အံ့သြဖွယ်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်တည်ဆောက်တဲ့အခါသူတို့ကမကြာခဏအပေါငျးတို့သဒုက္ခရှိနေသော်လည်းအားလုံးလုံ့လဝိရိယအလုပ်ကောင်းစွာတရားမျှတစေကြောက်မက်ဘွယ်လစာနှုန်းထားများနှင့်အသက်ဝင်စေဖို့ကိုခေါ်သောနိုင်ပါတယ်။
ပရိုဂရမ်းမင်းအကြောင်းကိုစပ်စု? အဘယ်ကြောင့်ပထမဦးဆုံးလေ့လာသင်ယူဖို့ programming ကိုစကားကောက်မဟုတ်!
ကွန်ယက်အချိန်ပရိုတိုကော (NTP) ကဘာလဲ? | တစ်ဦးကအပြီးအစီးလမ်းညွှန်